Ukuthamba kokuPhila kwe-35m² studio eDunkirk - I-Airbnb
Ukuthamba kokuPhila kwe-35m² studio eDunkirk
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguEve-Rose
Indlu ekwindawo yokuhlala imizuzu eli-10 ukusuka eDunkirk, kunye nebhasi yasimahla yemizuzu emi-5 yokuhamba. Indawo ezolileyo ikufutshane neevenkile.Ukufikelela ngokulula kwindlela i-A16 kunye ne-A25.
Indawo yokuhlala eyi-35 m² edityaniswe nendlu kunye nokufikelela egadini kwabo batshayayo. Uya kuba nokufikelela kwigumbi lakho labucala, igumbi lokuhlambela labucala kunye nendlu yangasese. Igumbi lokuhlamba impahla likwakhona, kunye nendawo encinci yokutyela enefriji, imicrowave kunye nezitya.
Ukuba le ndawo yokuhlala ayifumaneki, yiya "kwigumbi labucala .... ubumnandi bobomi eDunkirk" ...
Misa i-Covid .. amanyathelo okuthintela endaweni
Indlu yosapho apho ubomi bulungile, inxalenye yayo sisitudiyo esihlanganisiweyo sabucala kwaye senzelwe indawo yakho yokuhlala. Uya kuba nalo lonke ubumfihlo obufunayo ngexesha lokuhlala kwakho eDunkirk
Ndiyabulela kwibhokisi engundoqo ungafika ngokuzimeleyo
4.93 · Izimvo eziyi-170
Indawo yokuhlala ezolileyo
Umbuki zindwendwe ngu- Eve-Rose
Abancinci abadla umhlala phantsi abathembekileyo kudumo lwabantu basemantla ngeemvakalelo zabo zokubuk' iindwendwe, ndiyakuvuyela ukukwamkela ukuze ndibelane nawe okomzuzwana ukuba uyafuna. Ukongeza, ndiya kuba nakho ukuphendula zonke izicelo zakho kwaye ke, ndikucebise.
Ekugqibeleni, ndingavuya ukudibana nabahambi abavela kwihlabathi lonke kwaye ndiphucule isiNgesi sam!
Abancinci abadla umhlala phantsi abathembekileyo kudumo lwabantu basemantla ngeemvakalelo zabo zokubuk' iindwendwe, ndiyakuvuyela ukukwamkela ukuze ndibelane nawe okomzuzwana ukuba…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dunkerque